काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । छोरी निर्मला पन्तको न्यायको लागी लड्दा लड्दै मानसिक सन्तुलन गुमाएका बुवा यज्ञराजलाई उपचारको लागी काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । कंचनपुरमा उपचार सम्भव नभएपछी उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो ।
उनलाई विमानबाट ल्याउने तयारी गरिएपनि विमान कम्पनीले यज्ञराजलाई ल्याउन नमानेपछि गाडीमा ल्याइएको हो । चियाउने र हातपात गर्ने स्वभाव भएपछी उनलाई काठमाडौँ सम्म पुर्याउन तिन जना प्रहरी पनि खटाइएको थियो । तर अस्पताल ल्याई पुर्याउदा उनको खुट्टा फ्याक्चर भएको पाइयो । गाडीमा काठमाडौँ ल्याउने क्रममा बर्बराउने तथा उफ्रिने भएपछी उनलाई शान्त पार्ने सुइ लगाएर लाइएको थियो ।
मानसिक वार्डमा राखेर उनको उपचार थालिएको र उनको उपचारमा डा तीर्थमान श्रेष्ठ नेतृत्वको मेडिकल टिम खटिएको जनाईएको छ । उनको एक्सरे रिपोर्टमा खुट्टा फ्याक्चर भएको पाइएको छ ।
कञ्चनपुरमा देखियो दर्दनाक दृश्य, निर्मला पन्तका बुबाको बिग्रियो मानसिक सन्तुलन, आफ्नै मान्छेलाई कुट्न थाले, पुलिस कै बन्दुक खोस्ने प्रयास (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । न्याय माग्दा माग्दै निर्मला पन्तको परिवारमा झन् अर्को बज्रपात भएको छ । कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराज पन्तले मानसिक सन्तुलन गुमाउनु परेको छ।
महिनौँ देखि न्यायको भिख माग्दै आएका निर्मलाका बुबा र उनको परिवारको बिछिप्त हालत दर्शाउने यो भन्दा दर्दनाक अवस्था के होला? बुबा यज्ञराजको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएपछि उनले सडकमा अस्वाभाविक हर्कतहरू गरेका दृश्य यो भिडियोमा देखिन्छ। न्यायका लागि धर्नमा बसेका बेलामा पनि उनी बर्बराउने, नाराबाजी गर्ने र बेलाबेलामा जोसिने अनि रूने गर्दै आएका छन्।
सरकारसँग न्याय माग्दामाग्दै थाकेका निर्मलाका पिताको कहालिलाग्दो यो अवस्था देख्दा कसको मन थामिएला? यो देशमा यदि न्याय हुन्थ्यो भने यी पिताको आज यो हाल पक्कै हुने थिएन। निर्मलाका बुबाले मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि बीच सडकमा र धर्नामा देखाएको यो अस्वाभाविक कृयाकलाप र हिंस्रक व्यवहारले उनको बेहाल अवस्था दर्शाउँछ।
कतिसम्म भने निर्मलाका बुबा यज्ञराजले सुरक्षाकर्मीको हातबाट बन्दुक खोस्ने प्रयास समेत गरेका छन्। भिडियो हेर्नुहोस :
स्थानीय प्रशासनले धर्नामा बसेका निर्मलाका बुबाआमालाई स्वास्थ्यप्रति ख्याल गर्न आग्रह गरिरहेको भए पनि घटना अनुसन्धानबारे कुनै जानकारी नदिने गरेको नेगीको भनाइ छ । पछिल्लो समय निर्मलाका बुबाआमाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गइरहेको छ । “हामीलाई न्याय मिल्छ कि मिल्दैन, तपार्इंहरुले संसद्मा आवाज सशक्त बनाइदिनुप¥यो ।” निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले काङ्ग्रेस नेता गगन थापासित भन्नुभयो, “हामीलाई गरिएको उपेक्षाले न्याय पाउनेमा शङ्का बढ्दै गएको छ ।”
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूल प्रवेशद्वारबाट टिकट भएका यात्रीले मात्र प्रवेश पाउने !
काठमाडौं, ७ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूल प्रवेशद्वारबाट टिकट भएका यात्रीले मात्र प्रवेश पाउने भएको छ ।
यही मंसिर १५ र १६ गते नेपालमा आयोजना हुने शान्ति, वातावरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै विमानस्थलमा यात्रीको प्रवेश र सवारी–साधन पार्किङको विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएकोले मूल प्रवेशद्वारबाट टिकट भएका यात्रीले मात्र प्रवेश पाउने भएको हो ।
यात्री बिरामी, अशक्त वा सहयोगी नभइ नहुने अवस्थाको भएमात्रै यात्रीको साथमा एकजनालाई प्रवेश दिने र यात्री ‘डिपार्चर’तर्फ लागेपछि सहयोगी फिर्ता भइहाल्नुपर्ने पनि विमानस्थलले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सवारी–साधनहरु पनि यात्री अवतरण गर्नासाथ तत्कालै बाहिर प्रस्थान गर्नुपर्ने र होटल वा निजी गाडीलाई जहाज अवतरणको ५ देखि १० मिनेटअघिमात्र प्रवेश दिइने जनाइएको छ ।
श्रीमती दोश्रो सन्तान जन्माउने तयारीमा तर श्रीमान् काठकाे बाकस आइपुगे, त्रिभुवन विमानस्थलमा हृदयविदारक दृश्य (भिडियो)
काठमाडौँ। बैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा कुवेतमा कार्यरत ३७ बर्षिय बिष्णु घिमिरेको दुखत निधन भएको थियो। झापा माइधारा स्थायी घर भएका उनको पार्थिव शरीर नेपाल आइपुगेको छ ।
बिगत १३ वर्ष देखि कुवेतमा कार्यरत घिमिरे सुतेको अवस्थामै मृत फेला परेका हुन् । राजदुतावासले दिएको जानकारी अनुसार उनको हृदयघातको कारण मृत्यु भएको थियो । बेलुका सन्चै सुतेका उनलाई बिहान मृत भेटिए पछि स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो ।
कुवेतमा एजिलिटी कम्पनिमा सवारी चालकको रुपमा कार्यरत घिमिरेको श्रीमती र एक छोरा पनि छन् । श्रीमती गर्भवती भएको पनि खुल्नमा आएको छ । उनको एक भाई र एक बहिनी पनि छन ।
दुखद घटना घटेपछि उनको परिवारमा बज्रपात नै परेको छ । किनकी उनि एक्लैले पुरा परिवार धानेका थिए । अब आउने साल आफ्नो बहिनीको बिबाह गर्ने योजनामा थिए उनि । तर सबै सपना चकानाचुर भए । छोरा छोरीले बुबा गुमाए । श्रीमतीले श्रीमान गुमाए ।
उहाको शव नेपाल आइपुग्दा बिमानस्थलमै यस्तो भावविह्वल अबस्था देखियो :